မြန်မာပြည် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရမယ့်အချိန်နဲ့ ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေ ပြန်ဖွင့်မယ့်အချိန် - Zet Star
မြန်မာပြည် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရမယ့်အချိန်နဲ့ ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေ ပြန်ဖွင့်မယ့်အချိန်
October 28, 2020 ZCC News	0 Comments
မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဘယ်တော့လောက်ရောက်လာမလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းတွေနဲ့ အခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဘယ်အချိန်လောက်အထိပိတ်ထားရမလဲ?
ဒီမေးခွန်းက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းဆက်ပြောမိရင်းစဉ်းစားမိတာပါ…
ယခု လက်ရှိကူးစက်နေတဲ့အရှိန်နဲ့ဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကို ထိမ်းထားနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းအလမ်းဟာ ကာကွယ်ဆေးမပေါ် မချင်း (မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဆေးမရောက်မချင်း) လက်တွေ့မှာထိမ်းဖို့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့ ထင်မိတယ်… လူတွေက ဝမ်းရေးကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ First Wave တုန်းကလို့ အိမ်ထဲမှာ အကြာကြီးမနေနိုင်လောက်ကြတော့ဘူး အစိုးရကလည်းပိတ်မထားလောက်တော့ဘူး..
မြန်မာနိုင်ငံမှာထိမ်းနိုင်/ မထိမ်းနိုင်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက် သုံးပတ် နိုင်ဝင်ဘာ ၂၅ လောက်မှာကူးစက်မှုနံပါတ် ကိုကြည့်ရင်ခန့်မှန်းနိုင်မယ်…. မဲပေးကြမှာဆိုတော့…
နိုင်ငံအသီးသီးကတော့ Vaccine Distribution Plan ဆိုတာဆွဲနေကြပြီ…ဘယ်လိုဝယ်မယ်…ဘယ်လောက် ဝယ်ယူမယ်..ဘယ်လိုသယ်ယူမယ်… ဘယ်လိုသိုလှောင်မယ်…ဘယ်လိုဖြန့်ဖြူးမယ်.. စသဖြင့်ပေ့ါ…. အဲဒီ Plan ပေါ်ကြည့်ပြီး Vaccine ပေါ်မှစီးပွါး ရေးပြန်လုပ််လို့ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေက အစီအစဉ်ဆွဲကြရတယ်….ဘယ်လောက်တောင့်ခံ ရအုံးမယ်… ဒီကြားထဲ ငွေဘယ်လိုရအောင်ရှာမယ် ဘယ်လိုလည်ပတ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့…
ကိုယ့်နိုင်ငံကဆင်းရဲတော့ အဲဒါတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူး.. ကိုဗစ်-၁၉ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျောက်သွားဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံလူဦးရေ ၅၀ ရာနုန်းလောက်ကို ကာကွယ်ဆေးရဖို့လိုတယ်…. ဒါမှ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ Herd Immunity ရနိုင်မယ်..
ဒီ လူဦးရေကိုကာကွယ်ဆေးရဖို့… Vaccine ရဖို့ဖြစ််နိုင်ခြေဆိုတာ
(၁) WHO ရဲ့ COVAX: Working for global equal Access to COVID-19 Vaccine Plan နဲ့ရရင်ရ၊ (၂) ဆေးထုတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုက မြန်မာနိုင်ငံကိုလှူတာ (ဘယ်လောက်လှူနိုင်မလဲ)၊ (၃) ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ယူတာ
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၅၀ ရာနုန်းခန့်ကို ကာကွယ်ဆေးရဖို့ သန်း ၂၀ ကျော်လောက်အတွက် ဆေးရဖို့ ဆေးထိုးပြီးဖို့လိုတယ်…
အဲဒီသန်းနှစ်ဆယ် ဘယ်အချိန်လောက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဘယ်နေရရနိုင်မလဲ ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလဲ တွက်နိုင်ရင် လုပ်ငန်းတွေ လက်တွေ့ကျကျပြင််ဆင် ထားကြလို့ရပါပြီ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်တဲ့ အထဲမှာ အသက် ၁၂ နှစ်လောက်ကလေးတွေ အခုမှ စစမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထွက်လာပြီဆိုရင် တောင်ကလေးငယ်တွေအတွက် မပါလောက်သေးဘူး… ဒါဆို မူကြိုလို/အငယ်တန်းတွေအတွက် အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲ….
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်တဲ့ အထဲမှာ အသက် ၁၂ နှစ်လောက်ကလေးတွေက အခုမှ စစမ်းသပ်တဲ့ အဆင့်ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထွက်လာပြီဆိုရင်တောင် ကလေးငယ်တွေအတွက် မပါလောက်သေးဘူး… ဒါဆို မူကြိုလို/အငယ်တန်းတွေအတွက် အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲ?
← မနက်ဖြန်ကစပြီး အောင်နိုင်ရေးလှည့်သူများ လူ (၅၀) ထက်ပိုပါက ဖြိုခွဲခံရမည်
ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ တသောင်းတန် ပိုက်ဆံကို လူအများရှေ့ ဆွဲဖြဲပြသည့် ကျောင်းဆရာမကို အမှုဖွင့်အရေးယူ →